ခရိုမီယမ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(Chromium မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဗနေဒီယမ် ← ခရိုမီယမ် → မက်ဂနိစ်
6996279999999999999♠+280.0×10−6 cm3/mol (273 K)
အတည်ငြိမ်ဆုံး ခရိုမီယမ်၏ အိုင်ဆိုတုပ်များ
ခရိုမီယမ် သို့မဟုတ် ကရိုမီယမ် (Cromium)(ဓာတုသင်္ကေတမှာ-Cr ဖြစ်သည်။) သည် မာ၍ ငွေရောင်ကဲ့သို့ ဖြူပြာရောင် အဆင်းရှိပြီး မြင့်မားသော ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်ရသည့် ချောမွေ့ ပြောင်လက်သော သတ္တုဖြစ်၏။ မာကျောကာ ကျိုးပဲ့ လွယ်ပါသည်။ ၎င်းအား အပူ ပေးသောအခါတွင် ၎င်း၏ သဘာဝ စွမ်းရည်နှင့် အစိမ်းရောင်း ခရိုမိစ် အောက်ဆိုဒ် ပုံစံများ၏ တောက်ပမှုသည် လေထုထဲတွင် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ။ ခရိုမီယမ်သည် အောက်ဆီဂျင်ထဲတွင် မတည်မြဲသော ဒြပ်စင်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ပါးလွှာသော အောက်ဆိုဒ်အလွှာကိုချက်ချင်းထုတ်ပေးပါသည်။ မိုလစ်ဒီနမ်၊ တန်စတင်နှင့် ယူရေနီယမ် ဒြပ်စင်များအစုတွင် ပါဝင်၍ သတ္တုစပ်များ ပြုလုပ်ရာ၌ များစွာပင် အသုံးဝင်၏။ ကရိုမီယမ်ကို သယံဇာတအဖြစ်ဖြင့် ရရှိ၍၊ ဥက္ကာများတွင်လည်း အနည်းငယ်မျှတွေ့ရ တတ်သည်။ ၎င်းအောက်ဆိုဒ် အလွှာကြောင့် အရည်များ အောက်ဆီဂျင်သို့ ဖြတ်သန်းမရနိုင်သလို အောက်ဘက်တွင်လည်း သတ္တုက ကာကွယ်ထားသည်။ သို့သော် ကရိုမိုက်ခေါ် ကရိုမီယမ် သတ္တုရိုင်းမှ ထုတ်ယူရာ၌ အလွန်ခက်ခဲ၍ စရိတ်စခလည်း အလွန်များသောကြောင့် ဤသတ္တုမှာ မထင်ရှားဘဲရှိခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်လောက်ကမှ ကရိုမီယမ်ကို လူသိများလာကြပြီးလျှင် စက်မှုလုပ်ငန်း အမျိုးမျိုးတို့တွင် စတင် အသုံးပြုလာကြသည်။
၃ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
အစွန်းခံ သံမဏိကဲ့သို့ သံချေးမတက်၊ အစွန်းမထင်နိုင်သော သတ္တုစပ်များကို ပြုလုပ်ရာ၌ ခရိုမီယမ်သည် အရေးပါ အရာရောက်ဆုံးသော သတ္တုတစ်ခုဖြစ်၏။ သံချေးတက်တတ်သော သံနှင့်သံမဏိများကို ခရိုမီယမ် သို့မဟုတ် နစ်ကယ်ရောထားသော ခရိုမီယမ်နှင့် ရောစပ်လိုက်သောအခါ အလွန်အဖိုးတန်သော သတ္တုစပ်ဖြစ်လာ၍ သံချေးတက်ခြင်း၊ သံချေးစားခြင်း၊ အက်ဆစ်စားခြင်းတို့ကို ခံနိုင်လာသည်။ ဤသို့ ထူးကဲသော ဂုဏ်သတ္တိရှိသောကြောင့် သံချေးမတက်နိုင်အောင် တာရှည်ထားရမည့် ပစ္စည်းဟူသမျှကို ခရိုမီယမ်သတ္တုစပ်ဖြင့် ပြုလုပ်ကြ၏။ နစ်ကယ်နှင့်ခရိုမီယမ် သတ္တုနှစ်မျိုးကို ရောစပ်ပြုလုပ်ထားသော သတ္တု စပ်သည် အလွန်ပြင်းသော အပူဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိ၏။ မည်မျှပင် အပူပြင်းသော်လည်း အလွယ်တကူနှင့် မလောင်ကျွမ်းနိုင်ချေ။ ထို့ကြောင့် အီလက်ထရစ်ရေဒီယေတာခေါ် လျှပ်စစ်ဖြင့် အပူငွေ့ပေးသော ကရိယာများ အတွင်းရှိ နန်းကြိုးကလေးများကို နစ်ကယ်နှင့်ကရိုမီယမ် တို့ဖြင့် ရောစပ်ပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့ပြင် သံမဏိကို ခရိုမီယမ်နှင့် ရောစပ်သောအခါ အလွန်မာသောကြောင့် အမြောက်ဆန် ကျည်ဆန်များ၊ ဗေါဗယ်ရင်များ၊ မော်တော်ကား ဂီယာများ ပြုလုပ်ရာတွင် များစွာ အသုံးပြုကြလေသည်။ ထို့ပြင် ခရိုမီယမ်အား ဓာတုနည်းပညာဖြင့် ပတ္တမြားအတု(ချက်ကျောက်) ထုတ်လုပ်ရာတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
ခရိုမီ သံချပ်ဖြင့် တန်ဆာဆင်ထားသော ဆိုင်ကယ်
ခရိုမီယမ်သတ္တုသည် အလွန်မာ၍ အက်ဆစ် လွယ်လွယ်နှင့် မစားနိုင်သောကြောင့် ယခင်က အလွန် ခေတ်စားခဲ့သော နစ်ကယ်ရည်စိမ်ခြင်းကို အသုံးမများတော့ဘဲ ကရိုမီယမ်ရည်စိမ်ခြင်းကို များစွာ အသုံးပြု လာကြ၏။ ခရိုမီယမ်ရည် စိမ်ထားသော ပစ္စည်းများ၏ မျက်နှာပြင်များသည် အပွတ်အတိုက်ကို ကောင်းစွာ ခံနိုင်၏။ ခရိုမိတ်ခေါ် ခရိုမီယမ်သတ္တုရိုင်းကို သတ္တုကျိုဖိုများ၏ အတွင်းခံပစ္စည်းအဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုကြ၏။ ခရိုမီယမ် ဟူသည်မှာ ဂရိစကား 'ခရိုမာ'မှ ဆင်းသက်လာ၍ အရောင်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရ၏။ ကရိုမီယမ် ဒြပ်ပေါင်းများ၌ အရောင်အမျိုးမျိုး ရှိကြ၏။ မြ၊ နီလာ၊ ပတ္တမြား စသော တွင်းထွက်ကျောက်မျက်တို့၏ အရောင်ကွဲပြားခြားနားမှုသည် ထိုကျောက်မျက်ရွဲတို့တွင် ပါဝင်သော ခရိုမီသတ္တု အနည်း အများပေါ်တွင် အကြောင်းပြုသည်။ ခရိုမီယမ်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ကြသော ဗေရီယမ်ခရိုမိတ်၊ လက်ခရိုမိတ်၊ ဇင့်ခရိုမိတ်တို့မှ အရောင်အမျိုးမျိုးရှိသော ခြယ်ဆေးများကို ရရှိ၏။
ခရိုမီယမ် သတ္တုရိုင်းဖြစ်သော ကရိုမိုက်(FeCrO4) ကို အာဖရိကတောင်ပိုင်း တောင်ရိုးဒီးဇီးယားနယ်၊ ယူဂိုစလားဗီးယား၊ ကျူးဘား၊ နယူးကယ်လီဒိုးနီးယား၊အိန္ဒိယ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ တူရကီနှင့်ရုရှနိုင်ငံတို့တွင် အဓိက တူးဖော်ရရှိပြီး စုစုပေါင်း ၁၄ မီလီယမ် ထုတ်ယူပြီးဖြစ်သည်။
လူ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ခရိုမီယမ်များ၏ သက်ရောက်မှုများကို ဖော်ပြရမည်ဆိုလျှင် အသက်ရှူခြင်း၊ စားသောက်ခြင်း၊ အရေပြားနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရာတွင် ခရိုမီယမ် နှင့်ခရိုမီယမ် ကွန်ပေါင်းများသာ သက်ရောက်မှု ရှိသည်။ ခရိုမိတ်မှာ အလွန် အဆိပ်ပြင်းထန်သောကြောင့် လက်နှင့်ကိုင်တွယ်ရာတွင် အထူးပင် သတိပြုရသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်တွင် ထိရာ ရှရာများရှိ၍၊ ထိုထိရာရှရာများမှ သွေးထဲသို့ ခရိုမိတ်ဝင်သွားလျှင် သွေးနီဥများကို ဖျက်ဆီးပစ်တတ်သည်။ လေထု နှင့် ရေထုထဲတို့တွင် ခရိုမီယမ်၏ ပါဝင်နှုန်းမှာ များသောအားဖြင့် နည်းပါးပါသည်။ သောက်သုံးရေတွင်လည်း ခရိုမီယမ်ပါဝင်မှု နည်းပါးပါသည်။ သို့သော် ရေဒီယိုသတ္တုကြွသော ရေတွင်မူ ခရိုမီယမ်(၄) နှင့် (hexavalent cromium) ပါဝင်သည်။ လူများစားသုံးသော အစားအစာတွင် ခရိုမီယမ်(၃) ပါဝင်သည်။ ၎င်းအား လူများစားသုံးသော ဟင်းသီးဟင်ရွက်များ၊ သစ်သီးဝလံများနှင့် အသားများတွင် များစွာ တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သို့သော် အစားအစားများကို သတ္တုဗူးများနှင့် ကြာရှည်စွာ သိမ်းဆည်းထားလျှင် ခရိုမီယမ်၏ ပြင်းအား တိုးလာသည်။ ခရိုမီယမ် (၃၊၄၊၅၊၆) များ၏ ကျန်းမားရေး သက်ရောက်မှုများကို မူရင်းဆိုဒ်တွင် ဆက်လက် လေ့လာနိုင်သည်။
ပတ္တမြားနီသည် ခရိုမီယမ်-၃ ပမာဏအနည်းငယ်ပါဝင်သော တွင်းထွက်ကျောက်ဖြစ်သည်။
၎င်း၏ သက်ရောက်မှု အမျိုးအစားများမှာ များစွာရှိသည်။ ၎င်း၏ သက်ရောက်မှုများသည် ဩဂဲနစ် ဖြစ်စဉ်ပေါ်တွင်သာ မူတည်နေပါသည်။ ခရိုမီယမ်သည် လေ၊ ရေနှင့် မြေထဲသို့ ခရိုမီယမ်(၃) နှင့် (၄) များသည် သဘာဝဖြစ်စဉ်နှင့် လူသားများ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို ကျော်လွန်ပြီး ဝင်ရောက်ပါသည်။ လူတို့၏ ခရိုမီယမ်(၃)ပမာဏကို တိုးပွားလာစေသော လုပ်ဆောင်မှုများမှာ စတီး(လ်)များ၊ သာရေနှင့် အထည်အလိပ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ လူတို့၏အဓိက လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သော ခရိုမီယမ်(၄) များကို ဓာတုဗေဒ၊ သားရေများ၊ အထည်အလိပ်များ ထုတ်လုပ်ရာတွင်လည်း အသုံးပြုနှုန်း မြင့်မားလာသည်။ လျှပ်စစ် ပတ်လမ်းများနှင့်အခြား ခရိုမီယမ် (၄)များကို စက်ရုံများတွင်လည်း အသုံးပြုပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အသုံးပြုခြင်းသည် များသောအားဖြင့် ရေထဲတွင် ခရိုမီယမ်ပြင်းအားများကို တိုးပွားလာစေသည်။ လေထဲတွင်ရှိသော ခရိုမီယမ်အများစုသည် နောက်ဆုံးတွင် ရေထဲ အမှိုက်ထဲတွင် ပျော်ဝင်ကုန်ကြသည်။ အညစ်အကြေး အမှိုက်များတွင်ရှိသော ခရိုမီယမ်သည် အညစ်အကြေး အမှုန်များတွင် ပြင်းစွာတွယ်ကပ်နေကြသော်လည်း မြေအောက်ရေများဆီသို့ ရွေ့လျားခြင်းမရှိပါ။ ခရိုမီယမ်များသည် ငါးများ၏ ကိုယ်ထဲတွင် မည်မျှလောက် တိုးပွားနေသည်ကိုမူ မသိနိုင်ပါ။ သို့သော် ပမာဏ များပြားပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရေ၏မျက်နှာပြင်တွင် သတ္တု စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ အညစ်အကြေးများ ရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၎င်းစွန့်ပြစ်ပစ္စည်းများ အနီးအနားတွင် ငါးများ ကူးခတ်ခြင်းကြောင့် ငါးများ၏အရေအတွက် လေးပုံးတစ်ပုံ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။
↑ Fawcett, Eric (1988). "Spin-density-wave antiferromagnetism in chromium". Reviews of Modern Physics 60: 209. doi:10.1103/RevModPhys.60.209. Bibcode: 1988RvMP...60..209F.
↑ ဒြပ်စင်အလှည့်ကျဇယား ဘာသာပြန်ဆိုမှု ပရောဂျက်တွင် ပါဝင်သူ ကိုဘိုဘိုကျော်မှ ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ခရိုမီယမ်&oldid=723045" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။